ဖွဈနိုငျရငျ ရကေို မတျတပျရပျမသောကျကပြါနဲ့ – Maythadin
ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက်သောက်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ပြဿနာက ရေသောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ သောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပါပဲ။
လူတော်တော်များများက ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိပ်ပြီး မသိရှိကြသလို သတိလည်း မထားမိတတ်ကြပါဘူး။
သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ရေသောက်တဲ့အခါမှာ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားနဲ့ မသောက်သင့်ဘူးဆိုတာကို အံ့အားသင့်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁။အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် ရေသောက်တဲ့အလေ့အထဟာ ကြာလာတဲ့အခါမှာ အဆစ်ရောင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။
မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆစ်အဆက်များဆီသို့ အရည်ဓာတ်စီးဆင်းမှုကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရာမှတစ်ဆင့် အဆစ်ရောင်ရောဂါအတွက် အစလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
၂။အစာခြေစနစ်ကို ထိခိုက်စေမတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက် ခြင်းကြောင့်​ရေတွေဟာ အစာအိမ်နံရံတွေမှာပိန်ပြီးမြန်မြန် ဆန်ဆန် စီးဆင်းစေပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စီးဆင်းမှုဟာ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်စေကာ အစာခြေစနစ်ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
၃။​ရေဆာနေမြဲဖြစ်မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်တဲ့အခါမှာ ရေဆာတဲ့စိတ်က ပျောက်မသွားပါဘူး။မကြာခဏ​ရေထပ် ထပ်သောက်နေရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရေသောက်တဲ့အခါ ထိုင်ပြီးသောက်တာက ရေဆာမှုကိုပိုပြီးပြေလျော့စေပါတယ်။အနားမှာရေဘူးထားပြီး ထိုင်သောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကို​မွေးမြူထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
၄။အစာမကြေခြင်း မကြာခဏဖြစ်စေနံပါတ် ၂အချက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ
မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်စေကာ မကြာခဏ အစာမကြေခြင်းကိုဖြစ်စေမှာပါ။ ထိုင်ပြီးရေသောက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေကို ပိုပြီး အနားရစေပြီး အစာမြန်မြန်ခြေဖို့ကို အာရုံကြောများက အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
၅။​ကျောက်ကပ်မှ ကောင်းစွာမစစ်ထုတ်နိုင်ခြင်းမတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် ရေသောက်ခြင်းက ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို များစွာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလိုသောက်တဲ့အခါမှာ ကျောက်ကပ်မှ ကောင်းစွာစစ်ထုတ်မှုမပြုနိုင်တဲ့အတွက် အညစ်အကြေးတွေဟာ ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးအိမ်မှာ ကျန်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဆီးရောဂါဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုပါ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
၆။ခန္ဓာကိုယ်ရှိ acid level ကို မလျော့ကျစေပုံမှန်ထိုင်ပြီး ရေသောက်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ Acid level ကို ပိုနှေးကွေးပြီး လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်သောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၇။ အပူဖုနှင့် ရင်ပူရင်ကယ်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နှင့် အစာပြွန်ကြား အဆက်နေရာကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကာ အစာအိမ်အတွင်းရှိ အက်ဆစ် များ နောက်ပြန်စီးဆင်းပြီး အစာပြွန်ကို ပူလောင်ခံစားစေရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရင်ပူရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အပူဖုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
၈။ အာရုံကြောများ ဖိစီးစေထိုင်ပြီးရေသောက်တဲ့အခါမှာ ကြွက်သားနှင့် အာရုံကြောတွေကို အနားရစေပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မတ်တပ်ရပ်သောက်တဲ့အခါ အာရုံကြောတွေမှာ tension ပိပြီး ဖိအားများဖြစ်စေပါတယ်။
ကဲ . ကိုယ့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်နေတာမြင်ရင် ထိုင်ပြီး သောက်ဖို့ သတိပေးဦးနော်
ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့အတှကျ တဈနကေို့ ရေ(၈)ခှကျသောကျတာက ပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ပွဿနာက ရသေောကျတဲ့အခါ ဘယျလိုအနအေထားမြိုးနဲ့ သောကျဖွဈနလေဲဆိုတာပါပဲ။
လူတျောတျောမြားမြားက ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသတျပွီး သိပျပွီး မသိရှိကွသလို သတိလညျး မထားမိတတျကွပါဘူး။
သိပ်ပံနညျးကြ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ရသေောကျတဲ့အခါမှာ မတျတပျရပျအနအေထားနဲ့ မသောကျသငျ့ဘူးဆိုတာကို အံ့အားသငျ့စှာ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
၁။အဆဈရောငျခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျမတျတပျရပျအနအေထားဖွငျ့ ရသေောကျတဲ့အလအေ့ထဟာ ကွာလာတဲ့အခါမှာ အဆဈရောငျတဲ့ ဝဒေနာကို ခံစားလာရနိုငျပါတယျ။
မတျတပျရပျပွီး ရသေောကျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးရှိ အဆဈအဆကျမြားဆီသို့ အရညျဓာတျစီးဆငျးမှုကို အနှောကျအယှကျဖွဈရာမှတဈဆငျ့ အဆဈရောငျရောဂါအတှကျ အစလမျးကွောငျးကိုဖွဈစပေါတယျ။
၂။အစာခွစေနဈကို ထိခိုကျစမေတျတပျရပျပွီး ရသေောကျ ခွငျးကွောငျ့ရတှေဟော အစာအိမျနံရံတှမှောပိနျပွီးမွနျမွနျ ဆနျဆနျ စီးဆငျးစပေါတယျ။
ဒီလိုမြိုး ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ စီးဆငျးမှုဟာ အခြိနျကွာလာတဲ့အခါမှာ အစာအိမျနံရံကို ထိခိုကျစကော အစာခွစေနဈကို အနှောကျအယှကျဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။
၃။ရဆောနမွေဲဖွဈမတျတပျရပျပွီး ရသေောကျတဲ့အခါမှာ ရဆောတဲ့စိတျက ပြောကျမသှားပါဘူး။မကွာခဏရထေပျ ထပျသောကျနရေပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ရသေောကျတဲ့အခါ ထိုငျပွီးသောကျတာက ရဆောမှုကိုပိုပွီးပွလြေော့စပေါတယျ။အနားမှာရဘေူးထားပွီး ထိုငျသောကျတတျတဲ့အကငျြ့ကိုမှေးမွူထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။
၄။အစာမကွခွေငျး မကွာခဏဖွဈစနေံပါတျ ၂အခကျြမှာ ပွောခဲ့သလိုပါပဲ
မတျတပျရပျပွီး ရသေောကျခွငျးကွောငျ့ အစာအိမျနံရံကို ထိခိုကျစကော မကွာခဏ အစာမကွခွေငျးကိုဖွဈစမှောပါ။ ထိုငျပွီးရသေောကျတဲ့အခါ သငျ့ရဲ့ကွှကျသားတှနေဲ့ အာရုံကွောတှကေို ပိုပွီး အနားရစပွေီး အစာမွနျမွနျခွဖေို့ကို အာရုံကွောမြားက အထောကျအကူဖွဈစမှောပါ။
၅။ကြောကျကပျမှ ကောငျးစှာမစဈထုတျနိုငျခွငျးမတျတပျရပျအနအေထားဖွငျ့ ရသေောကျခွငျးက ကြောကျကပျရဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေို မြားစှာ အနှောကျအယှကျဖွဈစပေါတယျ။
ဒီလိုသောကျတဲ့အခါမှာ ကြောကျကပျမှ ကောငျးစှာစဈထုတျမှုမပွုနိုငျတဲ့အတှကျ အညဈအကွေးတှဟော ကြောကျကပျနှငျ့ ဆီးအိမျမှာ ကနျြရှိနနေိုငျပါတယျ။ ထိုမှတဈဆငျ့ ဆီးရောဂါဆိုငျရာ ပွဿနာမြားကိုပါ ခံစားရစနေိုငျပါတယျ။
၆။ခန်ဓာကိုယျရှိ acid level ကို မလြော့ကစြပေုံမှနျထိုငျပွီး ရသေောကျတဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးရှိ Acid level ကို ပိုနှေးကှေးပွီး လြော့နညျးစနေိုငျပါတယျ။ မတျတပျရပျသောကျတဲ့အခါမှာတော့ ဒီလုပျဆောငျခကျြက အထောကျအကူဖွဈစမှော မဟုတျပါဘူး။
၇။ အပူဖုနှငျ့ ရငျပူရငျကယျဖွဈစနေိုငျခွငျးမတျတပျရပျပွီး ရသေောကျခွငျးကွောငျ့ အစာအိမျနှငျ့ အစာပွှနျကွား အဆကျနရောကို အနှောကျအယှကျဖွဈစနေိုငျကာ အစာအိမျအတှငျးရှိ အကျဆဈ မြား နောကျပွနျစီးဆငျးပွီး အစာပွှနျကို ပူလောငျခံစားစရေပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ ရငျပူရငျကယျဖွဈခွငျးနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျ အပူဖုမြားဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။
၈။ အာရုံကွောမြား ဖိစီးစထေိုငျပွီးရသေောကျတဲ့အခါမှာ ကွှကျသားနှငျ့ အာရုံကွောတှကေို အနားရစပေါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ မတျတပျရပျသောကျတဲ့အခါ အာရုံကွောတှမှော tension ပိပွီး ဖိအားမြားဖွဈစပေါတယျ။
ကဲ . ကိုယျ့မိသားစု၊ သူငယျခငျြးတှေ မတျတပျရပျပွီး ရသေောကျနတောမွငျရငျ ထိုငျပွီး သောကျဖို့ သတိပေးဦးနျော